Noocyada ugu fiican ee alwaax ee musqusha | Qurxinta
Noocyada ugu fiican ee alwaax ee musqusha
Maria Jose Roldan | | Musqulaha
Qoryaha qol ka mid ah guriga sida musqusha waxay u baahan tahay dayactir gaar ah iyo Gebi ahaanba ka duwan yahay noocyada kale ee alaabta. Qoryaha ayaa aad ugu nugul qoyaanka, taas oo ah sababta daryeelka gaarka ah ee loogu talagalay ay aad muhiim u tahay. Kordhinta nolosha alwaax ee musqusha waxay ku xirnaan doontaa ilaa xad nadiifinta iyo dayactirka wanaagsan ee aad qabato maalin kasta.
Marka ay timaado daryeelka alwaax iyo ku haynta xaalad qumman, marka hore, waa inaad ogaataa nooca qoryaha iyo halkan ka sii, u dhaqmo si uun ama si kale. Maqaalka soo socda waxaan ku tusineynaa qoryaha ugu fiican ee aad ku isticmaali karto musqusha iyo sida ugu wanaagsan ee loo daryeelo loona daryeelo.
1 Noocyada alwaax ee musqusha
2 Daryeelka iyo dayactirka sagxada alwaax ee musqusha
Noocyada alwaax ee musqusha
Inta badan kiisaska, alwaaxda lagu isticmaalo musqusha inta badan waa tii ama larch. Marka ugu horeysa, waa alwaax kuleyl ah oo aan biyuhu lahayn. Tani waxay ka dhigaysaa nooc alwaax ah oo ku habboon isticmaalka musqusha.
Nooca kale ee alwaax ee inta badan lagu isticmaalo musqusha waa larch. Waa nooc alwaax ah oo biyaha u adkaysan kara. si fiican marka loo isticmaalo dhulka ama saxanka musqusha.
Inkasta oo ay tahay mid aan biyuhu ahayn, waa in aynaan iloobin in alwaaxdu ay tahay wax aad u jilicsan iyo waa muhiim in la raaco tabo ama tilmaamo taxane ah marka lagu ilaalinayo xaalad fiican. Haba yaraatee ma habboona in alwaaxda musqusha lagu dhejiyo heerkul ka sarreeya 60 digrii, sababtoo ah way dhaawacmi kartaa. Waqtiga nadiifinta iyo dayactirka waxaa la doorbidaa in had iyo jeer la doorto isticmaalka saabuun dhexdhexaad ah.
Daryeelka iyo dayactirka sagxada alwaax ee musqusha
Dabaqa alwaaxdu wuxuu u baahan doonaa daryeel taxane ah si aysan qoyaanka ama biyaha qubeyska u dhaawacmin. Dayactirka iyo daryeelka dabaqa ayaa inta badan ku xirnaan doona nooca alwaax ee loo isticmaalo:
Haddii ay dhacdo in alwaax lagu daweeyay saliid, sida qoryaha teak, waxaa fiican in la marsado nadiifiye ku habboon qoryaha noocan oo kale ah ama isticmaal saabuun yar oo dhexdhexaad ah. Aad bay muhiim u tahay in biyaha haray laga saaro oogada oo had iyo jeer alwaaxdu gebi ahaan qallajiso.
Xaaladda alwaax ee sagxadda oo lagu daaweeyay varnish, waxaa fiican in la isticmaalo saabuun dhexdhexaad ah oo yar. Isticmaal maro qoyan oo saabuunta waxaad ka saari kartaa dhammaan wasakhda ku ururtay. Waxa ku xiga waa in aad si fiican u qalajiso oogada oo dhan maro nadiif ah. Qoryaha kala duwan ayaa u muuqda mid aad u fiican gudaha musqusha laakiin waxay u baahan tahay taxadar weyn si looga hortago in ay waxyeello gaarto. Dhibaatada ugu weyn ee varnish ayaa ah in aysan ahayn walaxda biyuhu, sidaas darteed qoyaanku wuxuu si weyn u dhaawaci karaa varnish laftiisa. Marka la eego xagashada qaar ka mid ah dusha sare, waxa fiican in la ciido oogada oo dhan si looga tago sagxada alwaax si cusub. Waxaa jira kiisas ay alwaaxdu ka luntay ku dhawaad ​​dhammaan iftiinkeeda waxayna ku habboon tahay in mar kale la mariyo varnish yar oo dhan oo dhan.
Nooca ugu dambeeya ee alwaax marka ay timaado sagxadda dhulka waa dabiici. Qoryaha dabiiciga ah ayaa ah midka ugu adag dhammaan, markaa daryeelku wuu ka yar yahay marka loo eego alwaax la jarjaray iyo alwaax lagu daaweeyay saliid. Markaad nadiifinayso oo aad ku dhammaynayso wasakhyada suurtogalka ah ee soo ururay wakhti ka dib, kaliya mari biyo yar adigoo kaashanaya maro nadiif ah. Waa muhiim in la nadiifiyo iyadoo la raacayo jihada hadhuudhka alwaax. Haddii ay dhacdo in sagxaddu ay dhib kale soo gaartay, carrada aagga ayaa ku filan in alwaaxdu u ekaato mid cusub. Isticmaal warqad ciid ah oo aad ka heli karto dukaan kasta oo khaas ah oo ka saar wixii xagtin ah ee dusha sare.
Gaaban, alwaax waa shay ku haboon in lagu isticmaalo musqusha. Waxaad ku isticmaali kartaa musqulaha ama dhulka. Waxa kaliya ee xun ee ku saabsan walxahan noocan oo kale ah ayaa sabab u ah xaqiiqda ah in ay u baahan tahay daryeel aad uga badan noocyada kale ee alaabta. Waxaa muhiim ah in alwaax la doortay uu yahay mid aan biyuhu lahayn intii suurtagal ah si looga fogaado wasakhda qoyaanka ee suurtogalka ah iyo in lagu hayo xaalad qumman, inkastoo wakhtigu socdo.
Wadada buuxda ee maqaalka: Inicio » Meelaha » Musqulaha » Noocyada ugu fiican ee alwaax ee musqusha
Sida loo rinjiyeeyo qolalka fadhiga ee casriga ah: si fiican u dooro midabada
Sida loo dhigo sagxadaha laminateerka ee qolalka dhexdooda